GTT International - Genève: Fanambaran'ny GTT INTERNATIONAL-GENEVE
Fanambaran'ny GTT INTERNATIONAL-GENEVE
Ny GTT Iraisampirenena - Genève (GTT International – Genève), izay manana ny foibeny ao Genève (Suisse), dia manao izao fanambarana izao entina hamaliana ireo fanontaniana maro napetraka taminay.
Tsy manana antoko politika any Madagasikara ny fikambananay. Ny GTT Iraisampirenena – Genève dia manohana hatrany ny asa rehetra atao hanavotam-pirenena na any ivelany na any an-toerana.
Mazava sy mahitsy ny tanjon’ny GTT Iraisampirenena - Genève, izay himasoany sy hitolomany hatramin’izao, dia ny fiverenana amin’ny ara-dalàna, ny fitakiana fifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra, ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANA ary ny famoahana ireo gadra politika.
Amafisinay koa fa manohana tsy am-pisalasalana ny filatsahan-dRtoa Lalao Ravalomanana hitondra an’i Madagasikara ny GTT Iraisampirenena – Genève.
Farany dia tianay ny mampahatsiahy fa maro ny vondrona mitondra ny anarana GTT (Gasy Tia Tanindrazana) ary fikambanana samy mahaleo tena sy manana ny tanjony
Genève, 29 aprily 2013